गण्डकी प्रदेशका ५ जनाले कोरोना जितेर घर फर्किए
पोखरा, ३१ जेठ-गण्डकी प्रदेशका ५ जना संक्रमित कोरोना जितेर घर फर्किएका छन् । प्रदेशका ५ जना पुरुष संक्रमणलाई जितेर घर फर्किएको गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. विनोद विन्दु शर्माले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार काठमाडौंको हेम्स अस्पतालमा उपचाररत पोखराका ६० वर्षीय पुरुष कारोना संक्रमण निको भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । उनलाई गतहप्ता पोखराको आलुमाइलाचोकस्थित रहेको डेरामा अचेत अवस्थामा फेला पारेपछि आफन्तहरूले हेलिकोप्टर चार्टर गरेर काठमाडौंको ह्याम्स अस्पताल पुर्‍याएका थिए ।
उपचारका क्रममा स्वाब परिक्षण गदाए उनको कोरोना संक्रमण पोजेटिभ देखिएको थियो । त्यसैगरी नवलपरासी जिल्ला (बर्दघाट सुस्तापूर्व) मा कोरोनको संक्रमण पुष्टि भएपछि मध्यबिन्दु अस्पतालको आइसोलेसन कक्षमा उपचाररत कावासोती नगरपालिका १२ का २६ वर्षीय युवा घर फर्किएका छन् ।
त्यस्तै, बागलुङ जिल्लाको धौलागिरी अस्पतालको आइसोलेसन कक्षमा उपचाररत तामाखोला गाउँपालिका ३ का २१ वर्षीय २ जना पुरुष र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा कोरोनको संक्रमण पुष्टि भएका सोही अस्पतालको आइसोलेसन कक्षमा उपचाररत गोरखा जिल्ला आरुघाट गाउँपालिका २ का २५ वर्षीय युवा अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएर घर फर्केको डा. शर्माले बताए ।
संविधान शंसोधन गरिएकोमा खुशियाली
संविधान संशोधनमा १२ सांसद अनुपस्थित